‘व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ’
3 months ago 1053
व्यवसाय सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतले विभिन्न क्षेत्रमा तालिमहरु प्रदान गदै आएको छ । केन्द्रले धौलागिरीका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गदै आएको छ । केन्द्रले जस्तै कम्प्युटर, केश सिङ्गर, हावस वारिङ्ग, सिलाई कटाइ, पल्मविङ्ग यस्ता विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरुमा सिप मुलक तालिम सञ्चालन गदै आएको छ । देश संघियतामा गईसकेपनि यसको भावी रणनिति र यस केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाहरु कस्तो किसिमको हुन्छन । अव केन्द्रले भावी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा यस पर्वत नेपाल अनलाईनका पत्रकार साजन परियारले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतका प्रमुख किरणचन्द्र सुवेदीसँग गर्नुभएको समसामयिक कुराकानी ।
व्यवसायिक सिप विकास तालिम केन्द्रले के–के काम गर्छ ?
हम्रो कार्यालयको नामले पनि धेरैलाई थाहाछ कि हामी व्यवसायिक र सीपमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गछौँ । मुख्य त यसको काम भनेको कै सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्नु हो । यसले विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो कम्प्युटर, केश सिङ्गर, हावस वारिङ्ग, सिलाई कटाइ, पल्वम्विङ्ग जस्ता सीपमुलक तालिम विभिन्न क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गदै आएको छ । त्यसै गरि तालिम केन्द्र सँगै एउटा रोजगार सुचना केन्द्र पनि रहेको छ । यो हाम्रो अञ्चल स्तरिय कार्यालय हो । यसले पनि यो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरुको लगत संकलन गर्ने, रोजगार सम्वन्धी सूचना प्रवाह गर्ने । रोजगारदाताहरुले आफुलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति माग गरेको खण्डमा उहाँहरुलाई दक्ष जनशक्तिहरु हाम्रो कार्यालयमा उपलव्ध भएसम्म उहाँहरुलाई सिफरिस गर्नेसम्मका काम गर्छ । मुख्यता ः बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई रोजगार बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरुको आवश्यकता र पहिचानका आधारमा तालिमहरु प्रदान गछौँ ।
अहिले कस्ता खालका तालिम तथा कार्यक्रमहरु गदै हुनुहुन्छ ?
अहिले विशेषत हाम्रो आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार नै तालिम÷कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । त्यसमा दुई प्रकारका तालिम छन् । विशेष गरि हामी दिर्घकालिन र अल्पकालिन तालिम भन्छौ । दिर्घकालिन भन्नाले ३ महिनादेखी ६ महिनासम्म तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । त्यसै गरि अल्पकालिन तालिम अन्र्तगत १ महिलासम्मका तालिमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । यसमा दिर्घकालिन तालिम भित्र कम्प्युटर, केश श्रृंगार, सिलाई कटाई जस्ता सात वटा विषयमा हामीले ३ महिना देखी ६ महिनासम्म तालिमहरु सञ्चालन गदै आएका छौ । यसमा कम्प्युटर ३ महिनादेखी ६ महिना चल्छ । त्यसैगरि मोटारसाईकल मर्मत तालिम ६ महिनासम्म चल्छ । त्यस्तै अरु तालिम÷कार्यक्रमहरु ३ महिना चल्छन् । छोटा अवधिका तालिम भनेको जसलाई हामीले अल्पकालिन तालिम कार्यक्रम भनेर नामकरण गरेका छौ । ति तालिम पनि विशेषता यहि धौलागिरीका विभिन्न भौगलिक स्थानमा संचालन भईरहेका छन् ।
पर्वतका यूवायूवतीहरुमा कस्तो खालका तालिमको माग हुने गरेको छ ?
हामीले दुई प्रकारले तालिम सञ्चालन गर्छाै । मागका आधारमा हामीले अल्पकालिन तालिम सञ्चालन गछौ । आ–आफ्ना क्षेत्रमा स्थानीय चाहेको, आफुलाई कस्तो किसिमको तालिम आवश्यकता परेको छ । उहाँहरुले त्यही अनुसारको तालिमको माग गर्नुहुन्छ । कस्ता खालका भन्दा पनि सानो लगानीले धेरै आम्दानी दिने व्यवसाय चलाउन यूवाहरुको आकर्षण देखिनछ । त्यहि भएर त्यस्तै तालिमको माग हुने गरेको छ । यो चाँही मागको आधारमा भयो । दिर्घकालिन तालिम चाँही हाम्रो माथीवाट नै स्कीकृत भएर आएको हुन्छ । ति कार्यक्रमहरु हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चलाउने गछौ । त्यसैले हाम्रो दुई प्रकारले तालिम सञ्चालन हुन्छ । यूवाहरुको मागलाई सबै हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । हामी संग सिमित वजेट हुन्छ । सरकारले पनि सिमित कार्यक्रमको अख्तियारी दिने गरेको छ । त्यसैले जे छ त्यसैमा चित्त वुझाउनुपरेको छ ।
संघियता कार्यान्वयन संगै व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको संरचना कस्तो हुन्छ ?
अहिले यो संघियता कार्यान्वयन भएसँगै जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालय के हुने भन्ने खालको एउटा जनचासोको विषय रहेको छ । पर्वत नेपाल डटकम मार्फत म के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो सिप विकास तालिम केन्द्र यो आर्थिक बर्षसम्मका लागि स्थानीय तहमा जाने वा प्रदेशमा जाने भन्ने विषयमा कुनै कुरा भएको छैन । त्यसैले यो जिल्लामा नै रहन्छ । अर्को बर्षसम्म पनि यो जिल्लामा नै रहन्छ भन्दा फरक पदैन होला । अहिले सरकारले पनि बेरोजगारीहरुको दर घटाउने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकहरुलाई दक्ष बनाउने खालकोे नीति ल्याएका कारण यस्ता सिप मुलक तालिम सञ्चालन गर्ने तालिम केन्द्रको त झन आवश्यकता प¥यो । त्यसैले यो तालिम केन्द्र स्थानीय तहमा जादैन । तर अहिले भईरहेको स्वरुप चाँही केही परिर्वतन हुनसक्छ । जस्तो प्रदेश अन्र्तगत पनि जानसक्छ । केही समयका लागि संघले नै तानेर पछाडी विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न पनि सक्छ । यसरी स्थानीय तहमा जाँदैन भनिरहँदा कहिलेकाँही कस्तो हुँदो रैछ भने संघियता विरोधी कुरा ग¥यो कि भन्ने हुन्छ । यो संघियताको विरोध होईन । यो तालिम केन्द्र प्रत्येक स्थानीय तहमा गएर सञ्चालन गर्न अल्ली असम्थ्र्य हुन्छ । तर यसरी विभिजनको रुपमा रहेर विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिको समन्वयमा रहेर तालिम सञ्चालन गर्न सके व्यवथित हुने थियो । अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार केन्द्र संघ अन्र्तगत रहन्छ । स्थानीय तहमा जाँदैन होला ।
स्थानीय तहमा सीप बिकास सम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय कस्ले र कसरी गरिरहेको छ ?
तपाईले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । हाम्रो देशनै स्थानीय तहमय भएको छ । ७ सय ५३ तहले नेपाल बनेको छ । त्यसैले हाम्रा हरेक क्रियाकलपा र गतिविधी स्थानीय तहमै हुन्छन् । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । हामीले स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यक्रम पनि गरिराखेका छौ । यसरी कार्यालय जिल्ला स्तरमा रहेपनि अर्थवा डिभिजनको रुपमा रहेपनि कार्यक्रम त स्थानीय तहमा नै गर्ने हो । यसमा कुनै दुविधा छैन ।
व्यवसायिक सिप विकास तालिम केन्द्रले सदरमुकाम केन्द्रित छ कि गाउँमा पनि पुगेको छ ?
डिभिजन कार्यालयका रुपमा रहेको यस सिप विकास तालिम केन्द्रले साविकको धौलागिरीका ४ वटा जिल्ला हेर्न गर्दछ । हामीलाई यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र प्राप्त भईरहँदा खेरी हामीले कुश्माको कुश्मा बजारमा मात्र गर्ने, बागलुङको बागलुङ बजारमा मात्र गर्ने, म्याग्दीको म्यादी सदरमुकाममा मात्र गर्ने, मुस्ताङको मुस्ताङमा मात्रा गर्ने भन्ने हुदैन । म यस तालिम केन्द्रमा आईसकेपछि कहाँ तालिम पुगेको छैन । कहाँका नागरिकहरुले तालिम खोज्नुभएको छ । त्यही स्थानमा तालिम पु¥याउन उद्देश्यले म लागेको छु । त्यसैले हामीले पर्वतका पनि विकट क्षेत्रमा तालिम गरेका छौ । जस्तो अस्ति पर्वतको विकट मानिने बाँसखर्कमा तालिम सञ्चालन गरौँैँ । अहिले पर्वतको विहादी गाउँपालिका ३ रानीपानीमा सञ्चालन भईरहेको छ । बागलुङको राङखानीमा सञ्चालन भईरहकेो छ । बागलुङको बुर्तिवाङमा तालिम सञ्चालन भईरहको छ । म्याग्दीको बर्वाङ र बाँबियाँचौरमा तालिम सञ्चालन गरियो । मुस्ताङको जोमसोङमा एउटा तालिम सञ्चालन गरियो । हामीले धौलागिरीका विभिन्न भौगलिक स्थानमा पुगेर तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले प्रदान गर्ने सेवा केन्द्रकृत छैन ।